Gu Gu's Cyber Sandbox: ချက်ကြီး ရှက်တော့ ရယ်
ချက်ကြီး ရှက်တော့ ရယ်
မနက်ဖန် အလုပ်ပိတ်ရက်မို့ ဒီနေ့တော့ ဂျီတော့ခ် ကို စောစောဝင်လာဖြစ်ခဲ့တယ်... ထုံးစံအတိုင်း ကျနော့် ချစ်ဘော်ဒါ ချက်ကြီး တစ်ယောက်ကတော့ အရင်ရောက်နှင့်နေပါပြီ... သိသားပဲ... သူ့ကောင်မလေးကို လာစောင့်နေတာ... ဒီမှာ အံတိုလို့ သွားဖုံးတွေတောင် ရောင်နေပြီ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ... ချက်ကြီး နဲ့ ကျနော် ဂျီတော့ခ် ပေါ်မှာ စကားတွေ ပြောဖြစ်လိုက်တယ်... ခဏနေတော့ သူ့ချာတိတ်မလေး လာလို့တဲ့... ချက်ကြီးတစ်ကောင် အချစ်ဆုံး ဘော်ဒါ ကျနော့်ကို ထားခဲ့ပြီး လစ်သွားပါတယ်... (ကောင်းပါလေ့... မ ဖက်လိုက်လို့ မိုက်ဖက် ပါသွားရှာတဲ့ ချက်ကြီးရေ့...)
နာရီဝက်လောက် ကြာတော့.. ချက်ကြီး ဆီက ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် အူကြောင်ကြောင် မတ်စေ့တစ်ခု ရောက်လာပါတယ်... ဒီလို...
Chat Gyi: သူတို့ကို သတိယ တယ်လို့ပြောပေးပါ
Gu Gu: bel thu go lel? (ဘယ်သူ့ကိုလဲ?)
Chat Gyi: ဆောတီး
Chat Gyi: မှားကုန်ဘီ
Chat Gyi: ဟား ဟား
Gu Gu: bar tone ha (ဘာတုန်းဟ?)
taw taw paw (တော်တော်ပေါ)
lu paw gyi (လူပေါကြီး)
Sent at 1:43 AM on Thursday
ဟုတ်တယ်လေ... ဘယ်သူ့ကို သတိရကြောင်း ကျနော်က ပြောပေးရမလဲ.. အရင်းမရှိ အဖြားမရှိ... သူ့ ကြီးတော်ကြီး ကိုလား??? ချက်ကြီး ရှက်ရှက်နဲ့ ရယ်ပါတယ်... ကျနော်လဲ လိုက်ရယ်မိတယ်... တကယ်က သူ့ကောင်မလေးကို ပြောချင်တာ.. ကျနော် နဲ့ ပြောထားတဲ့ ဝင်းဒိုးမှာ လာယောင်ကြောင်ပြီး ရိုက်တာလေ... (ချက်ကြီး တို့ မွန်နေပုံများကတော့.. မိုးမမြင် လေမမြင် ပါလားကွယ်...)
သူက လာသေးတယ်.. “သတိရ” ကိုတောင် “သတိယ” တွေ ဘာတွေ လာလုပ်နေတယ်... ဒင်းက နုပြနေတာ... ထားပါတော့လေ... အင်တာနက်ခေတ်ထဲက ချက်ကြီး တစ်ယောက် အကြောင်းပေါ့...
ချက်ကြီး ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? သြော်.. ဒါတော့ မပြောတော့ပဲ ထားလိုက်ပါတော့မယ်... တော်ကြာနေ ချက်ကြီး တကောင် ရှက်ရှက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဟိုသင်းဟဝါတွေ ပြုနေလို့ ဒုက္ခတွေ ရောက်နေမှာ စိုးလို့ပါ...
Posted by Gu Gu at 2:01 AM
ဟားဟား.....ချက်ကြီး သတင်းပို့ သွားပါကြောင်း :P